Jordi Giménez's profile ee Actualidad iPhone | Wararka IPhone
Wax kasta oo xiriir la leh tikniyoolajiyadda iyo nooc kasta oo isboorti ah ayaan jeclahay. Waxaan tan kaga bilaabay Apple sanado badan ka hor iPod iPod - oo aan waligood midkoodna gacanta kor u qaadin - horaanba wuxuu ula macaamilayay dhamaan aaladaha farsamada ee uu awoodo. Khibradeyda Apple waa mid ballaaran laakiin waxaad marwalba diyaar u tahay inaad barato waxyaabo cusub. Adduunkan, tikniyoolajiyaddu si dhakhso leh ayey u socotaa oo Apple iyada ayaa ka reeban. Laga soo bilaabo 2009, markii 120GB iPod Classic uu gacmahayga soo galay, xiisihii aan u qabay Apple ayaa la toosay oo ku xigta ee gacmahayga soo gashay waxay ahayd iPhone 4, iPhone oo aan ku xidhnayn qandaraas Movistar iyo ilaa taariikhda in ku dhow kasta sanadka waxaan aadayaa qaabka cusub. Khibradda halkan waa wax walba oo in ka badan 12 sano oo aan la joogay alaabada Apple waxaan dhihi karaa in aqoontayda lagu kasbaday saacado iyo saacado. Waqtiga aan firaaqada yahay waan ka gooyaa, laakiin si dhib yar ayaan uga fogaan karaa iPhone-kayga iyo Macgayga. Waxaad iga heli doontaa barta Twitter-ka ee ah @jordi_sdmac
Jordi Giménez wuxuu qoray maqaallo 1720 tan iyo bishii Diseembar 2016
22 Jun Garaacista Dr. Dre Powerbeats Pro oo leh qiimo dhimis 90 euro ah
22 Jun Ugudbinta xirmooyinka istiikarada ah ee WhatsApp dhawaan ayey macquul noqon doontaa
21 Jun IPhone 13 wuxuu lahaan lahaa awood ugu badnaan 512GB
21 Jun Sida loo helo istiikarada WhatsApp
18 Jun Tani ma noqon doontaa mini mini-ga soo socda?
18 Jun Maalgelinta qiimaha 0 waxay ku noqoneysaa Apple dhammaan alaabteeda
17 Jun Qalabka loo yaqaan 'Nomad' ee loo yaqaan 'utomteenth' for AirTags
16 Jun Dareenka dareeraha gulukooska ee ku jira Apple Watch ama Galaxy Watch 4
16 Jun Ka raadinta istiikarada barta WhatsApp way fududaan doontaa dhowaan
15 Jun Qalabka cusub ee 'Beats Studio Buds' ayaa hadda rasmi ah
15 Jun Saddex midab oo cusub oo loogu talagalay kiisaska iPhone 12 MagSafe
14 Jun Xayeysiin "loo qaaday" loogu talagalay iPad Pro kaas oo Apple ku muujineyso kartidiisa
14 Jun Dukaammada Apple qaarkood waxay u oggolaan doonaan gelitaanka indha-shareerka dhowaan
11 Jun FaceTime ee ku jira IOS 15 ayaa kuu digi doona haddii aad hadasho oo aad aamusnaato
11 Jun Diiwaangelinta Apple Podcasts, waxay shaqeyn doontaa Juun 15
10 Jun Loolan cusub oo firfircoon ayaa soo socda. U dabbaaldeg Maalinta Caalamiga ee Yoga
10 Jun Apple wuxuu na tusayaa sida looga saaro "spam" kalandarka
09 Jun Muraayadaha Apple qeybtii labaad ee sanadka 2022
09 Jun Waji cusub oo waardiye ah ayaa ka muuqda watchOS 8 oo Apple aanu soo bandhigin
08 Jun Garaacis cusub oo loogu talagalay tuugada iPhone-ka oo leh astaamo "Raadi" cusub oo ku jira iOS 15